जंगली Toro जंगली Toro
यो Elk स्टूडियो संचालित स्लट कुनै जम्मा संग सर्वश्रेष्ठ स्लट हाम्रो क्यासिनो मा आवश्यक बीचमा छ. यो बुल-fighting.The खेल को एक कुरुप विषय आधारित छ लोकप्रिय स्पेन जहाँ matador रूपमा चिनिने पुरुष झगडे-बन्द वास्तविक साँढेको छ. विकासकर्तालाई विचार भन्दा आफ्नो सोचाइ टोपी लगाउँथे छ र यो स्लट संग आएका छन्. तिनीहरूले सफलतापूर्वक खेलाडीहरू कुख्यात खेल मन पराएका वा छैन धेरै मन जित्यो छ भन्ने कुरामा कुनै शंका.
जंगली Toro स्लट विकासकर्ता बारेमा
एल्क स्टूडियो मा उद्योग प्रविष्ट 2012 र गेमिङ सफ्टवेयर बादल मडारिरहेको गर्न एकदम नयाँ छ. यो स्लट संग कुनै जम्मा आवश्यक सर्वश्रेष्ठ स्लट यस विकासकर्ता विकास Bloopers साथ बीचमा छ, डीजे जंगली र टाको भाइहरूलाई. एक धेरै अधिक रोचक खेल यस विकासकर्ता विकास गर्न आशा गरिन्छ.
खेल भन्दा राखे छ5रील. जंगली प्रतीक Toro पहेंलो पत्र मा अंग्रेजी मा लेखिएको छ. को स्क्याटर एक सानो जुङ्गा संग क्रोधित matador प्रतीक हो. यो 2nd मा मात्र देखिन्छ, 3आरडी र 4th रील. बोनस प्रतीक5औं रील मा मात्र देखिन्छ जो बुल Toro छ. नियमित प्रतीक सुनको सिक्का हो, चाँदी र कांस्य र smashed सुन्तला र रातो गुलाब संग एक ठूलो अलंकृत प्रशंसक. को बुल Toro खेलको घूमन जंगली रूपमा कार्य र यो बायाँ तेर्सो उत्प्रेरित गर्छ रूपमा, यो जंगली symbols.The जंगली प्रतीक गर्न matador छरिन्छ उत्तेजित गर्दछ को Matador स्क्याटर वा बोनस बुल Toro प्रतीक प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन.
अवतरण3matador मा छरिन्छ तपाईंलाई लागि Matador Respin चुनौती ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ3निःशुल्क पुन spins. जब यसबाहेक छरिन्छ को समयमा रील देखा राउन्ड पुन spins, थप पुन spins जम्मा. जब जंगली प्रतीक को रील मा देखिन्छ राउन्ड समाप्त.
को गेमप्लेको र एनिमेशन प्रभाव कुनै जम्मा आवश्यक यो स्लट सर्वश्रेष्ठ स्लट गरेका छन्. यो स्लट विशेष गरी किनभने यसको रोचक पैदल wilds सुविधा को दुनिया भर खेलाडीहरू ध्यान पक्रने छ. त्यसपछि त्यहाँ निःशुल्क spins र multipliers लागि पेआउट सङ्कलन पाठ्यक्रम हो. र जंगली Toro मा Elk स्टूडियो द्वारा एक आकर्षक र चंचल उद्यम लागि बनाउँछ र उचित संग कुनै जम्मा आवश्यक सर्वश्रेष्ठ स्लट छ.